Siyaasi ku taliyey in la caawiyo dhallinyarada ka soo noqota IS iyo dood ka dhalatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Isis i Syrien. Foto: AP Photo / militant website, File / TT.
Siyaasi ku taliyey in la caawiyo dhallinyarada ka soo noqota IS iyo dood ka dhalatay
La daabacay måndag 19 januari 2015 kl 10.51
Dhamaadkii todbaadkii hore ayaa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Örebro Rasmus Person oo xubinna ka ah xisbiga Centern, ku taliyey in dhallinyarada u dagaalami jirtey kooxda dolwadda Islaamiga ah ee dib u soo noqda la siiyo taageero dhanka caafimaadka maskaxda iyo weliba sida ay shaqo ku heli lahaayeen.
Laakiin hindisaha xildhibaankan ayaa dhaleceyn iyo diidmo lagala horyimid. Mid ka mid ah dadka ayaa uga dhiidhiyey hindihasan waa Robin Nilsen oo ah guddoomiayah ururka dhallinyarada Liberalka ee gobolka Örebro Län.
"Anniga waanba diidanahay in ay dib u soo nqodaan. Dalka Ingriiska tusaale waxaa ka socota dood la xiriirta in laga mamnuuco in kooxaha noocan dib ugu soo noqdaan"
Waxay aheyd intii todobaadkii hore markii wararka sheegeen in labo dhallinyaro soomaali ah oo ka tagtey degmada Örebro lagu dilay dalka waqooyiga Ciraaq iyaga oo u dagaalamaya kooxda dowladda islaamiga ah. Dhamaadka todobaadkii hore ayey degmada Örebro ka billaabatay dood la xiriirta sidii lagu caawin lahaa dhallinyarada ugu dagaalantay kooxda IS ee dib u soo noqota. Basle arrintaan ayaa dood aad u adag ka abuurtay dalka Sweden. Dadka qaar ayaa ku dooday in dhallinyaradan ay tahay in la cinqaabo marka ay soo guriyo noqdaan halkaa laga caawin lahaa.
Ka dib dood adag oo intii lagu jirey fasaxa todobaadka arrintaan ka dhalatay ayaa keentey in uu Rasmus Person dib uga noqdo taladii uu soo jeediyey.
"Ujeedka marna ma aheyn in aan shaqo uga abuurno Örebro dagaalyahanada IS. Balse sida dadka ka baxa kooxa ganga ah loo caawiyo ayey qabaa in loo caawiyo dhallinyarada iskaga soo baxa argagaxisada" ayuu yeri Rasmus Persson (C).
Waxuu sidoo kale carabka ku adkeeyey ereyga cinqaab.
Marka hore ciqaab waan laga marsiiyaa fal denbiyeedyada ay soo geysteen in ay kooxda u dagaalamayeen, ka dibna la siiyo taageero iyo caawin oo u dhiganta sida loo caawiyo kooxa ka baxa ganga.
Rasmus Person ayaa fikirkiisa taagero uga helay Mona Sahlin oo dowladda u qaabilsan ka hortaga xagjiriinta.
Marka hore lama oran karo dhamaan dhallinyada soo noqdey waxay soo geysteen dhibaatooyin. Kuwooda soo geystey dabcan waa in la cinqaabo, laakiin dhallinyrada badanaa waa lagu khiyaanaa in ay kooxdan ku biiraan, markey arkaan waxay yahiina way iska soo noqdaan, ayey tiri Mona sahlin oo dowladda u xilsaaran ka hortaga xagjirnimada.
Lakiin Robin Nilsen oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada Liberalka ee gobolka Örebro ayaa qaban in dhallinyaradan ku biira argagaxisa aysan aheyd kuwo aan ka warqabin waxay ku biirayaan.
"Dhallinyaradan ma ahan kuwo ku sanbariirahood arrimaha ay faraha la galeen balse waa dad ogsoon waxay sameynayeen. Kooxda IS video-yaal propaganda ah oo ay dhallinyarada ku soo jiitaan, iyaga oo weliba video-yada soo geliya dad ay bireynayaan, marka laga oran karo dhallinyarta ma oga waxay sameynayaan".